Ukuvalwa kweCanal Suez kuya kuchaphazela ishishini le-elektroniki | IPhone iindaba
Ukuvalwa kweCanal Suez kuya kuchaphazela ishishini le-elektroniki
UToni Cortés | | Ezahlukeneyo
Sonke siwubonile umfanekiso othusayo wenqanawa ezindabeni Kusoloko unikwa wawela kwi-Suez Canal. Emva kokucinga nge "pitote" ekufuneka ibotshwe macala omabini ejelo, iinqanawa zingakwazi ukuwela, sikhawuleza silibale umxholo sicinga ukuba oku "kukude kakhulu" ngaphandle kokukunika ukubaluleka okukhulu.
Kodwa inyani yile yokuba ukuvalwa komnye weyona miqolomba ibalulekileyo yokuwela emhlabeni inokuchaphazela ukuthengwa kwempahla yayo nayiphi na imveliso kwihlabathi liphela, nokuba kungayekwa imveliso ngenxa yokunqongophala kwezinto, okanye ukulibaziseka ukuhanjiswa kwezinto ezigqityiweyo ezilungele ukufikelela kumaziko okusasaza.
Ukuvalwa okwenzekileyo kwi-Suez Canal ngokungathandabuzekiyo kuya kuchaphazela ukuhanjiswa kweenkonzo kwihlabathi liphela, kubandakanya ukulibaziseka kokuthunyelwa izinto ze-elektroniki kunye nezixhobo Kwiiveki ezimbalwa ezizayo, ucinga ukuba inokulungiswa kwiintsuku ezimbalwa.
2 I-12% yeemarike zehlabathi zidlula kwi-Canue Suez
3 Iapile ayinakuchaphazeleka kakhulu
I-Ever Ever, enye yezona nqanawa zinkulu zokuhambisa emhlabeni, yawela emhlabeni Umsele weSuez ngolwesiThathu, phakathi kwisaqhwithi sentlabathi. Inqanawa iye yawela yaza yatshatiselwa kulo mjelo, kuthintela enye yeendlela zorhwebo ezixakekileyo emhlabeni.
Sele ubangele ukugcwala kwezithuthi ngokuthintela i amakhulu eenqanawa kunye neembonakalo ezibanzi zokuhamba ezinjengezibuko ezigcwele izikhongozeli ezimiyo. Nangona abasemagunyeni besebenza ngokungxama ukucoca lo mjelo kwiintsuku nje ezimbalwa, nkqu 'i-hiatus' emfutshane inokuba nefuthe elikhulu kulwabiwo lonikezelo lwehlabathi.
Impembelelo yokuxinana kwetrafikhi sele ivakala ngexesha nje lokuhambisa ngenqanawe. Ukuba uNikeziwe uhlala ebambekile iveki okanye iintsuku ezingaphezuluIindlela zokuhambisa ulwandle ziya kusokola kwaye uya kongeza ubuncinci iintsuku ezili-10 ngamaxesha aqhelekileyo okuhambisa.
I-12% yeemarike zehlabathi zidlula kwi-Canue Suez
Kujikeleze Iipesenti ezili-12 zorhwebo lwehlabathi Ujikeleza ngeSuez Canal. Kwaye ngelixa uninzi lweemveliso zabathengi ezithunyelwa e-US zisiya kunxweme olusentshona zisuka e-Asiya, ukujika kwezithuthi kuya kugxotha kumazibuko asele ekho ukulibaziseka nokulibaziseka ngenxa yobhubhane we-coronavirus kunye nokwanda kwemfuno zabathengi zombane.
Uninzi lwabenzi beetshiphu bathumela izinto zabo ezibuthathela ixesha emoyeni, ke akucaci ukuba zingaphi izihlanganisi ezichaphazelekayo. Ngenxa yoko, kunokwenzeka ukuba isehlo saseSuez Canal «zichaphazela iimveliso ezigqityiweyo ukodlula abenzi bezixhobo, ”utshilo umhlalutyi woPhando uGartner uAlan Priestley kwiThe Wall Street Journal.
Nangona abalawuli bemijelo benokuthi baphinde bayidade le nqanawa kule veki, iinqanawa ezilindileyo azizukuhamba kwangoko ngomjelo. Ukuhlolwa kweendlela zorhwebo, kunye nesantya esilinganiselweyo, kuyakucothisa ukubuyela kwisitrafikhi esiqhelekileyo iintsuku ezininzi. Konke oku kucinga ukuba i-Ever Given ayonakaliswanga. Oko kufuna ukuba utsalwe kumsele, usebenze kancinci kunokuba ungawuwela wedwa.
Iapile ayinakuchaphazeleka kakhulu
Xa kuthelekiswa nabanye abenzi bezixhobo, iApple khange ichaphazeleke kukunqongophala kwe-chip yehlabathi ekhoyo ngoku. Ukongeza, ayiqhelekanga ukusebenzisa uthutho lwaselwandle kakhulu ukuhambisa emva kolwaziso olutsha, ngenxa yokubaleka oku kubandakanya.
Nangona kunjalo, I-Apple ibinengxaki yokubonelela ngaphambili inxulumene nokulibaziseka kwimigca yokuhambisa, kuba ngamanye amaxesha ibonelela isitokhwe seevenkile zayo ngenqanawa ehleliweyo ngenqanawa, ngelixa ithumela iiodolo kubasebenzisi bayo ngenqwelomoya.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » Ukuvalwa kweCanal Suez kuya kuchaphazela ishishini le-elektroniki
I-Apple ikhokela ukuthengwa kweenkampani zobukrelekrele bokuzenzela kwiminyaka yakutshanje
Ukuvuza: i-iPhone 13 Pro iza kuza emnyama kunye nokuphuculwa kwekhamera